!! #General #Min #Aung #Hlaing #စစ်ခုံရုံးဖြင့် #စစ်ဆေးမည့် ပြစ်မှုများ | democracy for burma
!! #General #Min #Aung #Hlaing #စစ်ခုံရုံးဖြင့် #စစ်ဆေးမည့် ပြစ်မှုများ
tags: မုဒိန်းမှု, အဂတိလိုက်စားမှု, Burma, china, Commander-in-Chief of Defence Services, Kokang, martial law, Myanmar, Senior General Min Aung Hlaing
← #MYANMAR #BURMA #Red #Cross #convoy #SHOT
!! #အချုပ်အချာအာဏာကို #အထိပါးမခံ #မြန်မာ့မြေကို #တလက္မအထိမခံ →